peeraporn y. – Page 17 – Myanmar Live
ဖျားနာသူတရုတ်တစ်ဦးကို ကိုရိုနာသံသယဖြင့် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ ဆေးရုံပို့ထား
January 31, 2020 January 31, 2020 - by peeraporn y.
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကွမ်ကျိုးမြို့က ရောက်လာသည့် လေယာဉ်ပေါ်မှ ဖျားနားသူတရုတ်တဦးအား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် သံသယရှိသဖြင့် ဝေဘာဂီဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း ရန်ကန်လေဆိပ် …
ထိုင်းနိုင်ငံထဲခိုးဝင်သည့်မြန်မာ ၅ ဦးကိုဖမ်းဆီး!! “တရားမဝင်ပွဲစားကို တစ်ဦးလျင်ဘတ် ၁ သောင်းပေးခဲ့ဟု ထွက်ဆို”
ယမန်နေ့ (၃ဝ-၁-၂ဝ၂ဝ) တွင် “မြန်မာလုပ်သားများကိုတရားမဝင်ခေါ်ဆောင်သည့်လူမှောင်ခိုဂိုဏ်း” တစ်ခုကိုဖမ်ဆီးနိုင်ခဲ့သည်ဟု ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ မဲဆောက်-တာ့ခ်အမြန်လမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည့် ဟွေ့လုရေလှောင်တမံအနီးရှိ မယ်ပကျေးရွာလမ်းတွင် …
တရုတ်နိုင်ငံသားများကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာထုတ်ပေးမှု ခေတ္တဆိုင်းငံ့ရန်ဆွေးနွေးမည်
January 30, 2020 January 30, 2020 - by peeraporn y.
တရုတ်နိုင်ငံမှ လာရောက်သူများကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာထုတ်ပေးမှု ခေတ္တဆိုင်းငံ့ရန် နိုင်ငံခြားရေး ကြီးဌာနနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက …
တကိုယ်တော်အခွေထုတ်တာ ကိုယ့်အတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ အဆိုတော်ဇော်ပိုင် ဖွင့်ဟ
January 29, 2020 January 29, 2020 - by peeraporn y.
မြို့အဝင်ည တေးစီးရီးနဲ့ ပရိတ်သတ်ရင်ထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်ဇော်ပိုင်ဟာ ဆယ်စုနှစ်တွေကြာပြီး တဲ့နောက်မှာတော့ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သလို တကိုယ်တော်အခွေတွေလည်း ထွက်ရှိထားတဲ့အဆိုတော်ပါ။ ဇော်ပိုင်ဟာ သူ့ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်အခွေသစ်ကို …
လင်းနို့ကတဆင့် မြွေဟောက်ကနေ လူကိုကူးစက်ပြီး အဆုတ်ရောင်စေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မျိုးစိတ်သစ် ၂ဝ၁၉ (သို့မဟုတ်) ပြင်းထန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ကူးစက်ရောဂါဟာ …
မန္တလေးရှိ ဝူဟန်သား ၇၃ ဦးကို တရုတ်အစိုးရက အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ခေါ်ဆောင်
January 29, 2020 - by peeraporn y.
မန္တလေးမြို့သို့ရောက် ရှိနေသည့် တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ သား ၇၃ ဦးကို တရုတ်အစိုးရက အထူး လေယာဉ်ဖြင့် …
စိန်ခေါ်ခံရလို့အိမ်နီးနားချင်းကို ကားဖြင့်ဝင်တိုက်သူ အဖမ်းခံ!!
January 28, 2020 January 28, 2020 - by peeraporn y.
အယုဒ္ဓခရိုင်ရှိ အိမ်ရာတစ်ခု၌ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်နေထိုင်သည့်အိမ်နီးချင်းကို ကားဖြင့် ဝင်တိုက်ခဲ့ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသည့် အသက် ၅၆ နှစ်ရှိ မစ္စတာဖိုင်ဘွန်ကို …
တစ်ပတ်တာ ကံဇာတာဟောစာတမ်း ၂၇ ဇန်နဝါရီ – ၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ၂ဝ
January 27, 2020 January 27, 2020 - by peeraporn y.
တနင်္ဂနွေသား/သမီး အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သင့်အပေါ်သစ္စာမရှိသည့်လက်အောက်ငယ်သားမှ ပြဿနာဖန်းတီးခြင်း သတိပြုပါ။ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လာဘ်မကောင်းပါ ငွေရဖို့ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ရ မည်။ အချစ်ရေးတွင် …
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် မြန်မာလုပ်သားများအတွက် သက်တမ်းတိုးပေးနိုင်ရန် CI စင်တာ ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည်
January 24, 2020 January 24, 2020 - by peeraporn y.
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် မြန်မာလုပ်သားများအတွက် သက်တမ်းတိုးပေးနိုင် ရန်အတွက် CI ထုတ်ပေးရေးစင်တာများကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထပ်မံဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာ …
အသင်းကြီးတွေနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အခွင့်အရေးများနေတဲ့ FA Cup စတုတ္ထအဆင့်
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ FA ဖလားစတုတ္ထအဆင့်ရှိနေတဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ရပ်နားထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ FA Cup ပြိုင်ပွဲက အသင်းငယ် အသင်းလတ်ပါမကျန် …